जानिराख्नुहोस् ! यस्तो समस्याको कारण लाग्नसक्छ आँखासम्बन्धी गम्भिर रोग ! जानकारीको लागि सेयर गर्नुहोला – MediaNP
काठमाडौँ । गर्मीयामको सुरु भएसँगै थकान, अनिन्द्रा, प्रदुषण तनाव, जस्ता विभिन्न प्रकारका समस्याको कारण आँखामा कालो धब्बा बस्ने गर्छ । पछिल्लो समय अत्याधिक स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने भएको कारण पनि आँखामा विभिन्न समस्याहरु देखिने गर्छ । त्यसकारण यस्तो समस्याबाटा छुटकारा पाउनको लागि सबैभन्दा पहिले तनाव कम, स्मार्ट फोनको प्रयोग कम, र भरपुर मात्रामा निदाउन सक्यो भने यस्तो समस्याबाट सजिलै मुक्ति पाउन सकिन्छ । त्यसकारण आज हामी तपाईहरुलाई आफ्नो आँखा हेरेर आफु कति स्वस्थ छु भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भन्ने बारे बताउन गइरहेका छौँ ।
आइ ब्याग : पोषणको कमीले लाग्ने एक प्रकारको रोग हो आइ ब्याग । यदि यस्तो अवस्थामा आँखाको तल्लो भाग सुनिन्ने भारी महसुश हुने जस्तो समस्या देखा पर्छ । त्यसकारण लामो समयसम्म यस्तो समस्या रहिरह्यो भने डाक्टरसँग उचित परामर्श लिएर उपचारमा अगाडी बढ्नुपर्छ ।
आँखा पंहेलो हुनु : गर्मीयाम सुरु भएसँगै आँखा रातो हुने खतरा बढ्दै जान्छ । यदि जन्डिसको सक्रमण भएको छ भने आँखा पहेँलो बन्दै जान्छ । यद्यपी अत्याधिक जाड रक्सी सेवन गर्ने व्यक्तिको आँखामा पनि पहेँलो हुने समस्या हुन्छ ।
आँखा सानो हुनु : आँखा सामान्य भन्दा सानो हुँदै जानु भनेको आँखालाई आराम नपुग्नु हो । यस्तो हुनुलाई कुनै खतरनाक रोगको कारण पनि हुन् सक्छ ।
आखा रातो हुनु : आँखा रातोपन देखिनु एलर्जीको लक्षण हो । अत्याधिक धुलो र घामको कारण एलर्जी हुन सक्ने भएकाले घर बाहिर निस्कदा चस्माको प्रयोग गर्नुपर्छ ।